‘Fikarakaran’ny Kangoroa’ : Fitazonan’Aina ny Zaza Teraka Tsy Tonga Volana ao Etiopia · Global Voices teny Malagasy
‘Fikarakaran'ny Kangoroa’ : Fitazonan'Aina ny Zaza Teraka Tsy Tonga Volana ao Etiopia
MpanoratraPRI/PRX's The World
Voadika ny 26 Marsa 2015 19:32 GMT
Ao amin'ny hopitaly iray ao andrenivohitr'i Ethiopia, Wandamu sy ny vadiny Lakish eo am-panatontosana ny fikarakarana araka ny fanaon'ny kangoroa efa ho telo herinandro izao. Afaka matory irery sy omena nono ara-pahasalamana ankehitriny ny kambana iray salama sy ampy lanja kokoa. Mbola ao anatin'ny “kangoroa” kosa ilay zaza kambana iray tsy ampy lanja eo amin'ny nonon-dreniny. Sary: Dalia Mortada
Nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 17 Martsa 2015 ity lahatsoratra sy tatitra an'onjam-peo avy amin'i Dalia Mortada hoan'ny The World ity ary navoaka indray noho ny fifanarahana fifampizarana vontoaty.
Nampisy ny fahasamihafana eo amin'ny fiainana sy ny fahafatesan'ireo ankizy an'arivony teraka tsy tonga volana ao amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana ny vahaolana tsotra dia tsotra iray.
Ao amin'ny hopitaly tahaka an'i Zeweditu ao an-denivohitr'i Etiopia, Addis Abeba, tsy dia fahita firy ny “couveuse” (famelomana zazakely teraka tsy tonga volana). Ary raha misy aza, tsy azo antoka ny famatsiana herinaratra mba hampandehanana izany. Ka mitazona ireo ray aman-dreny manana zanaka teraka tsy tonga volana ao amin'ny hopitaly araka izay azo atao ny mpiasa, mandrisika ny “fikarakaran'ny kangoroa,” teknika nivoatra tao Amerika Atsimo folo taona lasa mba hamonjena ireo zazakely teraka tsy tonga volana sy zazakely tsy ampy lanja amin'ny alalan'ny fifampikasokasohana amin'ny hoditra .
Raha vao teraka ny zazakely iray – ka tsy misy olana goavana ara-pitsaboana hafa – dia aboridana hatao eo akaikin'ny tratran'ny iray amin'ny ray aman-dreny tsy asiana tati-nono ilay zazakely, eo amin'ny reniny izany amin'ny ankapobeny. Mijanona eo ela indrindra araka izay ilaina ilay zaza, andro maromaro, herinandro, na amam-bolana mihitsy – ary rakofana bodofotsy manodidina ny zaza sy ilay olon-dehibe.
Nijanona tao amin'ny hopitaly efa ho iray volana ny zaza kambana roa sy ny ray aman-dreniny. Teraka zara raha nahazo iray kilao ny kambana iray, ary latsaky ny iray kilao kosa ny iray hafa, ka samy nandrakofana zaza tsirairay avy i dada sy i neny nandritra ny telo herinandro teo. Ankehitriny, efa salama tsara ilay kambana mavesatra kokoa ary afaka matory samirery. Mbola eo amin'ny nonon-dreniny kosa ilay faharoa.
Mitsiky am-pahamenarana i Wandamu, rain'ireo zaza malefa-piteny. «Tamin'ny voalohany … .. tsy afaka nisakafo araka ny tokony ho izy ry zareo [kambana] saingy ankehitriny, hitanay fa efa minono tsara izy ireo ary tena faly izahay,” hoy izy, ary nihatokatoka nanaiky izany ihany koa ny vadiny, Lakish. Mbola miraikitra eo amin'ny tratrany ilay kambana iray kely indrindra.
Zava-dehibe ao Etiopia izany fahatsapana fifaliana izany, izay matetika iheveran'ny olona fa tsy ho velona ny zaza teraka tsy tonga volana.
Indrisy anefa fa misy ireo fiarahamonina sasany hilaza fa: Nanao ny fitsarany Andriamanitra’, ka natao ho faty any ho any ny zaza. Afaka hivelona tokoa izany zaza izany raha eo akaikin'ny reniny “, hoy i Alice Allen, mampianatra vondrona mpitsabo mpanampy ao amin'ny Hopitaly Zeweditu mikasika ny teknika antsoina ankehitriny hoe “Fikarakaran'ny Reny Kangoroa” na KMC.
Ho an'ireo ray aman-dreny sasany reraka, na dia izany aza, sarotra ny zavatra takiana amin'ny KMC. Birkutan, 30 taona, sambany vao ho renim-pianakaviana, ohatra, dia teto foana efa ho telo herinandro izao. Hita fa tena reraka ny masony. Matory eo amin'ny nonony mandritra ny 24/7 ny zanany, ary tsy ahafahana maka aina ny fiezahana matory mahitsy tsara foana.
Efa ho roa volana sy tapany sahady ny zanak'i Birtukan. Noho ny olana ara-pahasalamana, tsy maintsy mijanona ao anaty “couveuse” nandritra ny herinandro ny zazakely. Rehefa afaka izany, fonosina eo amin'ny nonon'i Birtukan atao KMC ny zaza. Saingy mbola miahiahy izy amin'izao fotoana izao.
“Hita tsy ampy lanja ilay zaza, ka tsy mino aho hoe hanampy ny KMC,” hoy i Birtukan miahiahy. Satria matahotra izy fa tsy ho velona ny zanany vavy, mbola tsy nanome anarana ilay zaza mihitsy aza izy. Miezaka manamaivana ny tahony ireo mpanampy mpitsabo.
Ao Etiopia, maro ireo fepetra noraisina mba hanampiana ny reny sy ny zaza ho velona; Tao anatin'ny taona vitsy, nanamboatra lalana bebe kokoa sy tobim-pahasalamana any amin'ny toerana lavitra mba ho mora idirana izy ireo ary nampiasa vola tamin'ny hopitaly fiterahana sy ny fitsaboana vonjimaika hoan'ny zazakely. Hita fa nandeha tsara avokoa izany fampiasam-bola rehetra izany. Nihena efatra heny ny isan'ny zaza tsy nahatratra ny faha-dimy taona hatramin'ny 1990. Saingy mila herinaratra tsy tapaka sy vola be isian'ny faharetana – izay samy tsy ampy ny famatsiana izany ao Ethiopia. Tsy ampy tahaka izany koa ny dokotera.
Mampihena ny fotoana tokony holanian'ny dokotera ny [KMC],” hoy i Allen manazava. “Tsy mila teknolojia ny fanaovana izany, ka sahaza tanteraka hoan'ny firenena an-dalam-pandrosoana, izay toa hita fa tsy mampiasa loha.”
Raha mbola mahatsapa ny vidin'ny fotoan-tsarotra sy henjana ny ray aman-dreny, dia ampy izany. Manao izany ankehitriny i Wandamu sy i Lakish. “Arakaraka ny fikolokoloantsika sy hihazonantsika ireo zazakely ireo no mampitombo ny fitiavantsika ihany koa,” hoy i Wandamu.
Tontosa ny tatitra avy amin'i Dalia Mortada noho ny vatsy avy amin'ny (Tetikasam-pitateram-baovao Iraisam-pirenena) International Reporting Project.
24 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Azerbaijan: Mipoitra ny fahanginana satria nokendrena ho faty ny mpikambana iray hafa ao amin'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+